एमालेमा देवत्वकरण र ‘ओली बा’
नेपाली राजनीतिमा असाध्यै शक्तिशाली बन्दै गएका व्यक्ति हुन्, खड्ग प्रसाद ओली । ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् । केपी ओलीका केही प्रशंसकले उनलाई बा भनेर सम्बोधन पनि गर्छन् । बा भन्ने अत्यन्तै आदरणीय शब्द हो । के साँच्चै ओली एमाले पार्टीमा बा हुने दर्जामा पुगेकै छन् त ?
लामो इतिहास बोकेको विशाल पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्नो अध्यक्षलाई बाको उपमा दिनु बाहरूको अपमान गरेजस्तै लाग्छ । यसरी कुनै शब्दको आफ्नो वजनलाई जे मन लाग्यो त्यो अर्थ लगाउनु हुँदैन । एमाले भनेको ओली र उनका छोराछोरीको मात्र पार्टी पक्कै होइन । सम्पूर्ण कार्यकर्ताका बा बन्न ओलीले के त्यस्तो चामत्कारिक कार्य गरेका छन् ? बा बन्न त्यति सजिलो छैन । छोराछोरीसँग बाका सम्बन्ध धेरै जोडिएका छन् ।
ओली बा जिन्दावाद भन्दा एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति व्यङ्ग्य र अपमान गरे जस्तो लाग्छ । यसै कारणले हुनसक्छ, केपी ओली पनि आफूलाई झन शक्तिशाली महशुस गरिरहेका छन् । बर्तमान परिदृश्य हेर्दा ओलीको क्रियाकलाप, यिनलाई गरिएको प्रशंसा र गुणगान अति चरम देखिएको छ । कुनै आस्तिक संस्कार र परम्परामा अदृश्य भगवानलाई जसरी मानिन्छ, त्यस्तै भगवानको एउटा अवतारको रुपमा चिनाउन खोजिँदैछ । कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्षलाई भगवान नै मानेर जयजयकार गरिनु हास्यास्पद लाग्छ ।
एमालेले गोदावरीमा गरेको विधान महाधिवेशनले फेरि ओली पुन: शक्तिशाली बनाइएका छन् । गोदावरी विधान महाधिवेशनको उपलब्धि भनेको आफ्ना कार्यकर्ताको प्रदर्शन मात्रै देखियो । घुमीफिरी रुम्जाटार भने जस्तै ओलीलाई चोखो र झन् शक्तिशाली बनाइयो । प्रधानमन्त्री कार्यकालमा ओलीले जति पनि काम गरेका थिए, ती सबै जायज थिए भनेर राजनैतिक दस्तावेज पास गराउनु थियोे । त्यो पास भयो । ओलीको विरोधमा बोल्ने कसैको शाहस देखिएन । विधान अधिवेशन नै ओलीमय बनाइएको थियोे । यो पार्टीको निरंकुश र तानाशाही प्रवृति नै हो ।
यसरी पार्टी संगठनमा व्यक्ति विशेषलाई देवत्वकरण गरिनु राजनीतिमा उल्टो बाटो तय गरिनु हो । पार्टी बलियो नभई झन कमजोर हुन्छ । संंसारमा व्यक्ति पूजा गर्दा पार्टी र संगठन नै समाप्त भएका उदाहरण छन् ।
नेपाली राजनीतिमा ओलीको योगदान नभएको होइन, झापा क्रान्तिदेखि अहिलेसम्म आउँदा उनका उल्लेखनीय योगदान छन् । एमाले पार्टीलाई यो उचाईमा पुर्याउन उनले गरेको त्यागलाई इतिहासले बिर्सिदैन । ओलीमा तुलनात्मक रुपमा उच्च रास्ट्रवादी छवि पनि छ । उनका बिर्सन नसकिने दुई ऐतिहासिक काम भनेका भारतसित नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नु अनि चुच्चे नक्सा निकाल्नु नै देखिए । ओलीलाई देवता नै नबनाई उनका राम्रा काम यी हुन् भनेर जनतामाझ ल्याउन सकिन्छ, यही परिस्थितिमा नै पार्टीको अध्यक्षको रुपमा ओलीलाई जयजयकार गरिनु उपयुक्त होइन । यतिखेर ओलीले आफूले गरेको गल्तीलाई पनि सत्य र साँचो बनाउन हर उपाय गर्दै छन् । केही भजन मण्डली बनाएर केपी बाको जय भन्दै नाच्न गाउन लगाएका छन् ।
राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही हुँदैन भनी कुनैबेला आफ्नो दुष्मन मानिएको प्रचण्ड र माओवादी पार्टीलाई एक बनाएर एउटा जेटका दुई पाइलट पनि बने । पद, कुर्सी र राजनीति स्वार्थका लागि गरिएको एकता नजोडिँदै फुट्यो । ओलीको स्वेच्छाचारी र सत्ताको दम्भले गर्दा एमाले पनि टुक्रियो । फलत: एमालेमा लामो सङ्घर्ष गरेर विशाल एमाले बनाएका माधव कुमार नेपाल नै एमाले फुटाएर नेकपा(एकीकृत समाजवादी) बनाए ।
देशमा करिब दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट सरकार आउँदा ओलीले धेरै सपना मात्र बाँडे र आफ्नो पार्टी मिलाउन सकेनन् । जग बिनाको नेकपा बिचमा ढल्यो । ओलीले आफ्नो पार्टी मिलाउन सकेनन् र सत्ता र शक्तिको झोकमा आँफू अनुकूलको संविधान व्याख्या गरी दुई पटक संसद नै भङ्ग गरे । पुन: सर्वोच्चको परमादेशबाट अहिले शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चाहना नहुँदा नहुँदै भाग्यले देउवा पाँचौ पटक प्रचण्ड, माकुने र उपेन्द्रको पूच्छर समात्दै प्रम बनेका छन् ।
नेतालाई पूजा गर्ने परिपाटीले मान्छे अहंकारी, दम्भी र स्वेच्छाचारी हुने र हिटलर नै बन्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । हामी सबै मानवीकरण हुनुपर्छ । मान्छे राम्रो छ, राम्रो काम गर्छ भने उसको कार्यलाई प्रशंसा र सम्मान गर्नुपर्छ, नकि उसलाई भगवान नै बनाउनु पर्दैन ।
राजनीतिमा पार्टी फुट्नु र जुट्नु स्वाभाविक नै मान्नुपर्ला तर एउटा पार्टीको अन्तर कलहले देशलाई नै बन्धक पारियो । जनताको सर्वोच्च निकाय संसदलाई भङ्ग गर्नु ओलीको ठुलो गल्ती हो । प्रधानमन्त्री भनेको कुनै पार्टीको मात्र होइन, सबै नेपाली जनताको अभिभावक हो । सौताका रिसले पोइका काखमा …..भने जस्तै आफ्नो पार्टीलाई मिलाए राख्न नसकेर कानुनमा नै नभएको संसद नै भङ्ग गरिनु ओलीको स्वेच्छाचार र अहंकारको चरम रुप हो ।
आफ्नै कर्मले बालुवाटारबाट बार्दली पुगेका ओली सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा र रिसको आवेग शमन गर्न प्रचण्ड र माधवको दोहोलो काढ्न ठिक्क छ । प्रचण्ड र माधबका गल्ती होलान् तर त्यो मिलाउने दायित्व अध्यक्षका हैसियतले ओलीकै हुनुपर्दथ्यो । पार्टीको अन्तर कलह मिलाउन असक्षम बनी बेला न कुबेला आफ्नो खल्तीको कानुन प्रयोग गरी चुनाव घोषणा गर्नु ओलीको ऐतिहासिक गल्ती हो । जति भजन मण्डलीले जयजयकार गर्दै हिँडे पनि यसको प्रायश्चित हुन सक्दैन ।
आज एक छिन ओलीको देवत्वकरण गर्दा केहीलाई क्षणिक फाइदा होला । तर सिङ्गो पार्टी र प्रणालीलाई ठुलो घाटा हुन्छ । पार्टी प्रणालीमा व्यक्ति पूजा गर्नु कार्यकर्तालाई ठुलो असर पर्छ । पूजाको परिणाम भोग्दा भोग्दै पुन: ओलीको मुर्ति नै बनाई धुप, दीप बाल्नु आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु हो । एमाले ओलीको निजी सम्पत्ति त होइन उनी त केवल अध्यक्ष हुन् । अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको भन्दैमा देवता बनाई यसरी जयजयकार गर्दा पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ ।
केपी ओलीलाई एमालेको अध्यक्षको रुपमा हरतहबाट सम्मान छ । कार्यकर्ता देखि जो कोहीले उनलाई अध्यक्षकै रुपमा सम्मान दिइयो भने सबैको कल्याण हुन्छ । पार्टीमा व्यक्ति होइन पार्टी र नीति स्थापित हुनुपर्छ । एमाले भनेकै ओली र ओली भनेकै एमाले बनाउनु उपयुक्त होइन । ओलीको गुणगान गाएर आशिर्वचन लिन खोज्दा पार्टी जिवन्त बन्न सक्दैन ।
नेपालमा देवत्वकरणका अरु पनि उदाहरण नभएका होइनन् । भीमसेन थापा,राजा त्रिभुवन, राजा महेन्द्र, वीपी कोइराला, गणेशमान, मदन भण्डारी, प्रचण्ड आदि । कसैलाई देवत्वकरण र दानवीकरण गरिनु स्थायी हुँदैन । देवत्वकरण र दानवीकरण दुवै समाजका घातक हुन् । यसले मानिसलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट विमुख बनाइदिन्छ । आलोचनात्मक दृष्टिकोणको अभाव हुन्छ । जब पार्टीमा स्वच्छ आलोचना हुँदैन अनि पार्टी बलियो हुन सक्दैन ।
आइतबार २४, असोज २०७८ १६:२२:५९ मा प्रकाशित